အပြစ်ဒဏ် လွတ်သွားတဲ့ ဗာဒီ ၊ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ခံစစ်ပစ်မှတ် ၃ ခုနဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
အပြစ်ဒဏ် လွတ်သွားတဲ့ ဗာဒီ ၊ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ခံစစ်ပစ်မှတ် ၃ ခုနဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုး ဟောင်း ဒန်နီရယ် စတာရစ် ဟာ မေဂျာလိဂ် ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စီစဉ် နေပြီး အမေရိကန် မှာ ဘောလုံး ကစားရင်း သူ ဝါသနာ ပါတဲ့ ဂီတ အလုပ်တွေ ကိုလည်း တိုးချဲ့ နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ် လို့ ကြားသိ ရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် ဟာ ကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ဟို ကို နွေရာသီ မှာ ရောင်းထုတ် ဖို့ အတွက် စီစဉ် ဆုံးဖြတ် ထားပြီး ဖြစ်တယ် လို့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က သုံးသပ် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး နည်းပြ မော်ရင်ဟို ကတော့ မတ်လ အတွင်းက FA Cup က ကိစ္စ အတွက် ၄ ပွဲပယ် အပြစ်ဒဏ် ကျခံ ခဲ့ရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ အဲရစ် ဒိုင်ယာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မှတ်ချက် ပေးလိုခြင်း မရှိဘဲ သူ သာ တစ်ခုခု ပြောလိုက်ပါက သေချာပေါက် ပြဿနာ တက်လိမ့်မယ် လို့ ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် စပါး ဟာ ဒိုင်ယာ ရဲ့ အပြစ်ဒဏ် ကို အယူခံ ဝင်ဖို့ အစီအစဉ် လည်း မရှိဘူးလိုပ သိရ ပါတယ် ။
ဖော်မြူလာဝမ်း ပြိုင်ကား အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်တဲ့ ရေးနော့ ဟာ သူတို့ရဲ့ ဂန္ထဝင် ပြိုင်ကား သမားကြီး ဖာနန်ဒို အလွန်ဆို ဟာ ၃ နှစ် ခန့် အနားယူ နေရာကနေ လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ထဲမှာ ကျင်းပမယ့် ပြိုင်ပွဲတွေ ကို ပြန်လည် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင် သွားမယ် လို့ အတည်ပြု ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
လက်စတာ စီးတီး တိုက်စစ်မှုး ဂျေမီ ဗာဒီ ဟာ အာဆင်နယ် နဲ့ သရေ ကျခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ မူစတာဖီ ရဲ့ ခေါင်းကို ကန်ခဲ့ ပေမယ့် FA ရဲ့ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် မှု ကနေ လွတ်ကင်း သွားခဲ့ တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် တောင်ပံ ကစား သမားလေး ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် ရဲ့ အေးဂျင့် ဖြစ်သူကတော့ သူ့ရဲ့ ကစား သမားဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာ အနာဂါတ် ရှိနေပြီး အငှား ထွက်ခွာမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကို ငြင်းဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ လိုင်ယွန် တိုက်စစ်မှုး မူဆာ ဒမ်ဘီလီ ကို အော်ဘားမီးယန်း ( သို့ ) လာကာဇက် ထွက်ခွာ သွားခဲ့ ပါက အစားထိုး ခေါ်ယူ ဖို့ စဉ်းစား ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် PSG နဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် တို့ကလည်း ဒမ်ဘီလီ ကို စိတ်ဝင်စား နေကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရင်းနစ် ကြယ်ပွင့်လေး ကာမာဗင်ဂါ ဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆို ဖို့ ကို ဆိုင်းငံ့ ထားတာကြောင့် ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို ပြောင်းရွှေ့ နိုင်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ တွေ ပိုမို မြင့်တက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ လာမယ့် ရာသီ အတွက် နောက်ခံလူ ၃ ဦး ကို စာရင်း ပြုစု ထားပြီး ဘုန်းမောက် နောက်ခံလူ နေသန် အကီ ၊ အေစီမီလန် နောက်ခံလူ ရိုမာနိုလီ နဲ့ ဗီလာ နောက်ခံလူ တိုင်ရွန်မင်းစ် တို့ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးရှား ကတော့ ဘုန်းမောက် နဲ့ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ နေသန် အကီ ကို တီးတိုး ပြောဆိုမှု ဟာ အသင်း ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အတွက် ကမ်းလှမ်းမှု ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ငြင်းဆန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် နဲ့ ကလပ် အသင်းတွေ ဟာ လူစား ၅ ဦး အထိ လဲနိုင်တဲ့ စည်းမျဉ်း ကို လာမယ့် ရာသီ အထိ ဆက်လက် အသုံးပြု ဖို့ ဆွေးနွေး နေကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် တောင်ပံ ကစား သမား အီဒင် ဟာဇက် ဟာ လေ့ကျင့်မှု ပြန်လည် ပြုလုပ် နိုင်ပေမယ့် အသင်းလိုက် လေ့ကျင့်မှုတွေ မှာတော့ မပါဝင် နိုင်သေးဘူး လို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဂိုးပေါက်ကို ဘယ်သူ ကာကွယ်သင့်သလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ် သုံးသပ်ပေးလိုက်တဲ့ ပီတာ ရှမိုက်ကယ်
မက်ဆီ ရော်နယ်ဒို တို့ရဲ့ ခြေရာကို နင်းနိုင်မယ့် ကစားသမား ၃ ဦးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဘာဘာတော့ဖ်
အပြောင်းအရွှေ ကိစ္စကို ရာသီသိမ်းမှ စဉ်းစားမယ်လို့ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ အော့ဘလက်
လူကာကူဟာ မန်ယူနိုက်တက်ကို ယူရိုပါလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာ ကြေကွဲ စေချင်နေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဘာဘာတော့ဖ်
စီနီယာ အသင်းဆီ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာမယ့် နောက်ထပ် ကြယ်ပွင့် တစ်ဦး အကြောင်း ပြောပြလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် ယူ 23 နည်းပြ နေးလ် ဝုဒ်
အာတီတာ လက်ထက် ကစားခွင့် ပျောက်ဆုံးနေမှု နဲ့ သူ့ရဲ့ အနာဂတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ဟ ပြောကြားလိုက်တဲ့ အိုဇေးလ်
အတ္တလန်တာ နဲ့ ပွဲအမှီ ဒဏ်ရာ က ပြန်ကောင်းအောင် ကုသပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ ဆေးအဖွဲ့ အပေါ် ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုလာတဲ့ #အမ်ဘတ်ပေ
အယ်လ်တက်ချ် အသင်းကို ဂိုးပြတ် အနိုင် ရရှိခဲ့တဲ့နောက် သူ့ရဲ့ အနာဂတ် အကြောင်း အရိပ်အမြွတ် ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် ပစ်မှတ် ဆန်ချို
လက်ကျန် ဆီမီးဖိုင်နယ် ၃ နေရာစာကို ဘယ်အသင်းတွေ ရယူ သွားမလဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဘာဘာတော့ဖ်
လစာ ၁၂.၅% လျော့မယူခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို ပထမဆုံး အကြိမ် ရှင်းပြလိုက်တဲ့ အိုဇေးလ်
ဗာနာ မရှိလည်း ၎င်းတို့ဟာ အဆိပ်ပြင်းဆဲပဲ လို့ အက်သလက်တီကို အသင်း ကို သတိပေး စကားဆိုလိုက်တဲ့ #နိုင်ဂျယ်စ်မန်း
Created by WOW STUDIO